Nahazo fanavaozana mahaliana miaraka amin'ny vaovao | Androidsis
Mahazo vaovao farany mahavariana miaraka amina endrika vaovao maro ny fotoana
Ara-potoana dia iray amin'ireo fiambenana tsara indrindra any Android, indrindra amin'ny endriny hita maso izay manome kalitao miavaka ho an'ny mpampiasa. Nanampy azy izany dia azon'i Google herintaona lasa izay. Ary, hatramin'ny nahazoantsika ity vaovao ity, dia vitsy ny vaovao momba ity fampiharana famantaranandro mamirapiratra ity tato anatin'ny herintaona ka hatramin'ny omaly.
Omaly Tonga ara-potoana ny kinova 3.1 izay manampy endri-javatra vaovao, manamboatra bug ary mandray singa UI nataon'i Material Design. Zavatra iray manome kalitao an-tsary ambonimbony kokoa, na dia mety mieritreritra aza ny fahasarotan'ilay studio ao ambadik'ity fampiharana ity noho ny asany lehibe amin'ity lafiny ity. Eto ambany eto isika dia mijery ireo hevitra mahaliana amin'ity kinova 3.1 ity.
1 Hatsarana famantaranandro
2 Estetika tsara kokoa hita maso
Tsara homarihina ny hatsaran-tarehin'i Timely Ary io dia iray amin'ireo fampiharana tian'i Google hampianarina ny zavatra hatao rehefa mieritreritra ny hamorona rindranasa vaovao ho an'ny Android ny mpamorona. Ny zava-misy fa tsy mora ny famoronana zavatra toa an'io, fa hey, izany no torolàlana nomen'ny Google ho an'ny mpamorona manana Material Design.
Anisan'ireo zava-baovao ateraky ny kinova Timely vaovao ny fanatanterahana endri-javatra vaovao amin'ny fanairana sy ny timer. Iray amin'ireto ohatra ireto ny kisary fanairana ao amin'ny bara fampandrenesana izay hiseho izao, na dia azo ovaina aza ity toerana ity raha tsy tian'ny mpampiasa izany. Ary iray amin'ireo fiasa vaovao koa ny fametrahana fanairana amin'ny fotoana mety amin'ny alàlan'ny fampiharana Google Now. Ny iray hafa izay tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha dia ny fahaizana mampihatra ny MP3 misy antsika manokana amin'ny fanairana.
Estetika tsara kokoa hita maso
Ankehitriny ny bara fitetezana sy fampandrenesana dia manjombona ary mampiasa ny loko marina rehefa mifindra eo anelanelan'ny fampiharana. Fomba iray hafa manasongadina ny mety hanemotra na hanafoana ny fanairana avy amin'ny bara fampandrenesana mba tsy hanelingelina antsika raha ilaina.
Ho an'ny ambiny, fanavaozana izay mitondra kalitao bebe kokoa raha azo atao ity famantaranandro mahafinaritra ity amin'ny Android ary inona mbola ohatra tonga lafatra amin'ny resaka famolavolana ho an'ny finday. Azo maimaim-poana tanteraka amin'ny Play Store izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Mahazo vaovao farany mahavariana miaraka amina endrika vaovao maro ny fotoana
romulus85 dia hoy izy:
Manangana vaovao ianao momba ny rindranasa izay novaina kely indrindra ary fantatry ny rehetra izany. Misy famantaranandro fanairana pata negra Espaniôla (izay nanana fiasa marobe izay tafiditra ao anatin'ity fanavaozana ara-potoana ity) miandry ny hamoahana azy ho Turbo Alarm (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turbo.alarm&hl=es). Heveriko fa hankasitraka izany ny mpamaky.
Mamaly an'i romulus85
Joyssel dia hoy izy:
Maniry aho fa hiverina any amin'ny fivarotana Google ny rindranasa TIMELY ALARM CLOCK, izany dia APK izay iriko raha hanao fanavaozana izy ireo, tena ahazoana aina sy mirentirenty miaraka amina endriny tena tsara.
Manantena ny valinteninao aho.
Mamaly an'i Joyssel
Miandry anao eny an-tsahan'ady ny fanilo miaraka amin'ny fanavaozana Boom Beach vaovao
Polaroid dia miloka amin'ny zava-drehetra amin'ny taratasin'ireo finday avo lenta ao amin'ny MWC 2015